Mampivelatra ny fahaiza-mamantatra ara-panahy
"Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy ´azony satria araka ny Fanahy no amantarana izany ". 1 Kor.2:14
Miparitaka mameno ny sahan'ny fanambarana ireo vatosoan'ny fahamarinana, kanefa nalevina ao ambanin'ny fampianarana voatolotry ny razana, ao ambanin'ny fanambarana sy didin'olom-belona izany, natao tsinontsinona ny fiainana ny fahendrena avy any an-danitra; fa nahomby Satana rehefa nitarika izao tontolo izao hino fa ny fanambarana sy ny fikarohana ataon'ny olona ihany no tena zava-dehibe. Nanome ny filazantsara an'izao tontolo izao tamin'ny vidiny tsy misy fetra ny Tompo Andriamanitra, ny Mpamorona izao rehetra izao. Amin'ny alalan'io fitaovana avy amin'Andriamanitra io no nisokafan'ny loharano mahafinaritra sy mamelombelona aina misy fampaherezana avy any an-danitra sy fampiononana maharitra ho an'ireo izay hanatona ny loharanon'aina. Misy fantsom-pahamarinana maro tokony mbola ho hita, saingy ara-panahy ny fahitana ny zavatra ara panahy.
Tsy afaka hahita ny tombambidin'ny fahamarinana izay ao amin'i Jesôsy ny saina nohamaizinin'ny faharatsiana. Rehefa ankamamiana ny fahotana dia tsy hahatsapa ny filàna hanao ezaka amim-pitandremana miaraka amin'ny vavaka sy fandinihana lalina ny olona, mba hahafantarany fa tsy maintsy mahalala momba ny lanitra izy na hamoy izany. Eo ambany aloky ny fahavalo mandrakariva izy ireo ka mahita ny fahamarinana tahaka ny olona mijery zavatra eo amin'ny fitaratra manjavozavo sy simba; fa maizina ny zavatra rehetra ary miova tanteraka amin'ny fijeriny.
Malemy sy tsy azo antoka ny fijeriny ara-panahy; fa tsy mba mijery eo amin'ny aloka izy ireo ary manome lamosina ny fahazavana. Fa ireo izay milaza ny tenay fa mino an'i Jesôsy dia tokony handrehitra ny fahazavana. Tokony hangataka fahazavana isan'andro avy amin'ny Fanahy Masina hanazava ireo takila ao amin'ny Soratra Masina izy ireo, mba araka ny hahafahany mahafantatra ny zavatra avy amin'ny Fanahin'Andriamanitra. Tsy maintsy manana fahatokiana mazava amin'ny Tenin'Andriamanitra isika, raha tsy izany dia very. Na dia lehibe aza ny fanambaran'ny olombelona, dia tsy afaka ny hahatonga antsika ho tanteraka hanao ny asa tsara rehetra izany.
"Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malalan'ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny Fanahy sy ny finoana ny marina" - 2 Tes. 2:13. Ambara eto amin'ity andininy ity ny fomba roa ho famonjena ny olona. Ny hery miasa mangina avy amin'Andriamanitra sy ny finoana matanjaka sy velona ananan'ireo mpanara-dia an'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fahamasinan'ny Fanahy sy ny finoana ny fahamarinana no hahatonga antsika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. RH, 1 Desambra 1891.